Kedu ka igwe ojii si agbaze? | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ka igwe ojii si agbaze?
Mmepe nke igwe ojii Ọ dị nwayọ nwayọ, n'ụzọ doro anya, mgbe usoro ahụ sitere na ha na-akwụsị ime. Ma ihe ndị ọzọ nwere ike itinye aka na akpata efu site na ụmụ irighiri mmiri ma ọ bụ kristal ice site na ígwé ojii dị ka ikpo ọkụ ikuku, ọdịda na ịgwakọta na ikuku ikuku gbara gburugburu.
Cloudgwé ojii nwere ike kpụ ọkụ n'ọnụ site na absorption nke anyanwụ ma ọ bụ terrestrial radieshon, ma ma phenomena ndị dịtụ ike tụnyere ndị adiabatic kpo oku.
Nke a bụ ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ikuku igwe ojii dị. Ka okpomọkụ nke ikuku na-abawanye, iru mmiri ọ na-ada na ikuku nwere ike ijupụta; mgbe, urukpuru urukpu ikusi ghọọ alụlụ mmiri a na-adịghị ahụ anya.
La anwụ anwụ ọ na-ebutekarị mgbasa nke igwe ojii nke ọgba aghara kpatara. Ọ bụrụ na radieshon nke anyanwụ zuru ezu banye n'ime ala, na-ekpo ikuku dị n'akụkụ elu ahụ, ọkwa nke odide nke ngwakọta na-ebili na, ya mere, isi nke Stratus ma ọ bụ Stratocumulus na-ebili kwa. Mgbe ahụ, ọkpụrụkpụ igwe ojii nke ejedebere na ngbanwe nke ọgba aghara na-ebelata ma igwe ojii ahụ mechara pụọ ​​kpamkpam.
na Ezigbo ihu igwe cumulus, nke a kpụrụ na ala ndị nwere mmetụta nke insolation, bụ ihe omume ọhụụ. Ha na-apụtakarị n'ụtụtụ, na-eru mmepe ha kachasị elu n'ehihie ma na-apụ n'anya ngwa ngwa mgbe ala jụrụ oyi ọzọ na njedebe nke ụbọchị.
Ikuku gbara igwe ojii gburugburu anaghị adịkarị mma. Gwakọta igwe ojii na ikuku a nwere ike, ya mere, mee ka iru mmiri na-erughị ala karịa 100% wee mepụta ụfọdụ mmiri n'ígwé ojii, nke na-emebi ma nwee ike ịgbasa.
Ozi ndị ọzọ - RH, Igwe ojii 'Morning Glory', ihe omimi nke ihu igwe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Kedu ka igwe ojii si agbaze?
Igwe ojii 'Morning Glory', ihe omimi nke ihu igwe